Inona ny fitantanana orinasa tag? Fa maninona no tokony hampiharinao ny fitantanana tag? | Martech Zone
Ny verbe ampiasain'ny olona eo amin'ny sehatry ny indostria dia mety hampisavorovoro. Raha miresaka momba ny fanoratana amin'ny bilaogy ianao dia mety hidika hisafidy teny izay manan-danja amin'ilay lahatsoratra tenifototra izany ary ataovy mora ny mitady sy mahita. Teknolojia sy vahaolana hafa tanteraka ny fitantanana tag. Raha ny fahitako azy dia heveriko fa tsy dia misy anarana…… nefa io no fiteny mahazatra manerana ny indostria ka hanazava azy izahay!
Inona no atao hoe Tag Management?
Tagging tranonkala iray dia manampy marika script amin'ny loha, vatana, na tongotra amin'ny tranokala. Raha mihazakazaka sehatra an-tserasera maro ianao, serivisy fitsapana, fanaraha-maso ny fiovam-po, na koa rafitra rafitra votoaty dinika na kendrena, dia saika mitaky anao hatrany ny hampiditra script amin'ireo modely ifotoran'ny rafitra fitantanana atiny. Ny rafitra fitantanana tag (TMS) dia manome anao script iray hampidirina ao anaty ny maodelinao ary avy eo azonao atao ny mitantana ny hafa rehetra amin'ny alàlan'ny sehatra fahatelo. Ny rafitra fitantanana tag dia ahafahanao manangana fitoeran izay ahafahanao mandamina am-pahalalana ireo tag izay tianao hitantana.
ao amin'ny orinasa fikambanana, fitantanana tag, ahafahan'ny ekipa marketing, ekipa mpamolavola tranonkala, ekipa atiny ary ekipa IT hiasa tsy miankina. Vokatr'izany, ny ekipa marketing nomerika dia afaka manaparitaka sy mitantana ny tag raha tsy misy fiatraikany amin'ny atiny na ekipa mpamolavola… na tsy mila mangataka amin'ireo ekipa IT. Ho fanampin'izany, ny sehatra fitantanana orinasa tag manolotra fanaraha-maso, fidirana ary alalana ilaina fanaparitahana haingana ary mampihena ny loza ateraky ny Breaking ny tranokala na ny fampiharana.
Aza hadino ny mamaky ny lahatsoratray amin'ny fanaparitahana fitantanana tag ecommerce, miaraka amin'ny lisitr'ireo tag kritika 100 hanaparitahana sy handrefesana ny fifandraisan'ny mpanjifanao sy ny fitondran-tenany mividy.
Fa maninona no tokony hampiasa rafitra fitantanana tag ny orinasanao?
Misy antony maromaro mety hanirianao hampiditra a rafitra fitantanana tag amin'ny asanao.
ao amin'ny tontolon'ny orinasa izay ny protokoloka, ny fanarahan-dalàna ary ny fiarovana dia manakana ny mpivarotra tsy hampiditra script mora ao amin'ny CMS. Ny fangatahana fanampiana, fanovana, fanavaozana na fanesorana ireo tagan'ny script an'ny tranokala dia mety hanemotra ny fahafahanao mitantana ny ezaka ataon'ny marketing. Ny rafitra fitantanana tag dia manitsy izany satria mila mampiditra marika tokana amin'ny rafitra fitantanana tag ianao ary avy eo mitantana ny ambiny rehetra avy amin'izany rafitra izany. Tsy mila mangataka fangatahana hafa amin'ny ekipan'ny fotodrafitrasa mihitsy ianao!
Ny rafitra fitantanana tag dia mandeha manerana tambajotra fanaterana atiny haingana be izany. Amin'ny alàlan'ny fangatahana tokana amin'ny serivisin'izy ireo ary avy eo dia mamoaka script ao anatin'ny tranokalanao, azonao atao ny mampihena ny fotoana fandefasana entana ary manafoana ny fahafaham-baraka ny tranokalanao raha toa ka tsy mandeha ambany ny serivisy. Io dia hampiakatra ny tahan'ny fiovam-po sy hanampy ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Ny rafitra fitantanana tag dia manome ny fotoana mety fadio ny fanamarihana mitovy, miteraka fandrefesana marina kokoa ny fanananao rehetra.
Matetika ny rafitra fitantanana tag dia manolotra teboka ary kitiho ny fampidirana miaraka amin'ireo vahaolana rehetra amin'ny taganao ny tranokalanao. Tsy mila kopia sy fametahana taonina akory, midira fotsiny ary alefaso ny vahaolana tsirairay!
Rafitra fitantanana marika marobe no nivoatra ary manome vahaolana matanjaka ho an'ny fizahana fizarana, fitsapana A / B, fanandramana marobe. Te-hanandrana lohateny na sary vaovao eo amin'ny tranokalanao hahitana raha mampitombo ny taham-pandraisana anjara na tsindry click-through? Mandrosoa!
Ny rafitra fitantanana tag sasany aza manolotra fandefasana votoaty mavitrika na kendrena. Ohatra, mety te hanova ny zavatra niainan'ny tranokalanao ianao raha toa ka mpanjifa mifanohitra amin'ny vinavina ny mpitsidika.
Tombontsoa 10 amin'ny fitantanana tag
Ity misy topy topimaso tsara momba ny tombontsoa 10 ambony amin'ny fitantanana tag ho an'ny mpivarotra dizitaly Nabler.
Sehatry ny Enterprise Tag Management Systems (TMS)
Ireto misy lisitr'ireo vahaolana momba ny fitantanana orinasa tag, aza hadino ny mijery ireo horonan-tsary amin'ny sasany amin'ireny mba hahalalana bebe kokoa ny fahaizan'ny rafitra fitantanana tag sy ny rafitra fitantanana tag.
Adobe Experience platform launch - Ny fiezahana mitantana ny fampiasan'ny mpanjifa ny teknolojia rehetra ao amin'ny valin'ny varotrao dia mety hosedraina. Soa ihany, ny Experience Platform Launch dia natsangana niaraka amina endrika voalohany-API, izay ahafahan'ny scripting mandeha ho azy ny fametrahana ny haitao, ny famoahana ny fizotran'asa, ny angon-drakitra ary ny fizarana, sns. Ka ny asa mandany fotoana tamin'ny lasa, toy ny fitantanana tag an-tranonkala na ny fikirakirana SDK finday, dia mila fotoana kely kokoa - manome anao fifehezana faran'izay betsaka sy automatique.
Hazavao - Tantano ny marika sy ny data rehetra ataonao amin'ny alàlan'ny interface iray intuitive, misy mihoatra ny 1,100 fampidirana mpivarotra turnkey. Ampitahao sy fenoy ireo loharano angon-drakitra voazarazara manerana ny haitao sy fitaovana handroahana ROI lehibe kokoa avy amin'ny fivoaran'ny haitao mivoatra amin'ny alàlan'ny mpitantana tag data iray data.
Google Tag Manager - Google Tag Manager dia mamela anao hanisy na hanavao ny tagan'ny tranokalanao sy ny rindranasa finday, mora sy maimaim-poana, isaky ny mila izany, nefa tsy asiana bontolo ireo olona IT.
Tealium iQ - Tealium iQ dia ahafahan'ny fikambanana mifehy sy mitantana ny angon-drakitra sy ny mpivarotra MarTech amin'ny Internet, finday, IoT, ary fitaovana mifandray. Fitaovana ekosistra mihoatra ny Fampidirana mpivarotra turnkey 1,300 atolotra amin'ny alàlan'ny tag sy API, azonao atao ny manaparitaka sy mitantana mora ny mari-pamantarana mpivarotra, mizaha toetra teknolojia vaovao, ary farany mifehy ny fantsom-teknolojika varotrao.
Tags: fanombohana rahona adobe fanandramanasehatra traikefa adobefandefasana adobeadobe tag managermihazonafitantanana orinasa tagmpitantana ny tag orinasaGoogle tenifototra mpitantanafitantanana tagsehatra fitantanana tagrafitra fitantanana tagtealium iqTMS